Dihy, kanto an-dalambe: nahitam-pahombiazana ny « Mitsàka » andiany faha-9 | NewsMada
Tontosa, ny 28 novambra hatramin’ny 2 desambra teo tany Toamasina, ny andiany fahasivy amin’ny “Festival Mitsàka”. Raha tsiahivina, sehatra iray anehoana ny talentan’ireo matihanina amin’ny dihy ankehitriny sy hampahafantarana ireo talenta vaovao izy ity ary notanterahina isan-taona, tany Foulpointe.
Nanomboka tamin’ny 2016, niova ho isaky ny roa taona ny hetsika, nosokafana tamin’ny seha-javakanto hafa, indrindra ny kanto an-dalambe sy ny “cirque”, nanomboka ny taona 2012. Ankoatra izany, tsy najonana tany Foulpointe ny hetsika fa nentina tao Toamasina, nanomboka tamin’ity andiany fahasivy ity.
Azo lazaina ho nitondra vokatra tsara izany fanovana izany, raha ny voalazan’ny mpikarakara, nanamafy fa nahitam-pahombiazana tokoa ity andiany fahasivy amin’ny “Mitsàka” ity. Ny antony, tanteraka avokoa ireo fandaharam-potoana napetraka tany am-boalohany ary marobe hatrany ireo olon-tsotra: ankizy, tanora ary olon-dehibe, tonga nanatrika ny seho.
Anisan’ny zava-dehibe indrindra, tamin’izany fahombiazana izany, ny fahafahan’ny “Mitsàka” manome vatsim-pianarana na “bourses de formation” ho an’ny tanora iray, izay nahitam-pivoarana be tao anatin’ny taona maromaro. Hotanterahiny any Maorisy io fiofanana io, mandritra ny iray volana.
Nisongadina, nandritra ny “Mitsàka”, ny fahatongavan’ny manampahaizana, matihanina amin’ny dihy, avy atsy Maorisy, nanofana ireo mpampiofana ao Toamasina. Nahazo “attestation”, tena ilaina amin’izany fampianarana izany, izy ireo. Naharitra 30 ora kosa ny fiofanan’izy ireo, nandritra ity “festival” ity.
Marihina fa marobe ireo mpandray anjara, avy eto an-toerana sy avy any ivelany, nahatratra 144 (avy amin’ny kaompania samihafa), tamin’ity “Mitsàka” andiany fahasivy ity. Mankahery sy mampirisika ny mpikarakara hanohy ny hetsika ny fahamaroan’ny mpanohana, tamin’ity taona ity.